बेलायतमा ५० प्रतिशत युवाले कण्डम नै प्रयोग गर्दैनन् ? आखिर किन ? Kasthamandap Daily
लण्डन । बेलायतमा गरिएको एक सर्भेक्षणका अनुसार १६ देखि २४ बर्ष उमेर समूहका झण्डै ५० प्रतिशत युवाले पहिलो पटक सेक्स गर्दा कण्डम प्रयोग गर्दैनन् ।
किन गर्दैनन ?
कारण यस्तो छ– धेरै जसोले कण्डमले यौनको स्वादलाई फिक्का गरिदिने अर्थात कण्डमले यौन आनन्दमा कमि ल्याउने बताएका छन् ।
कतिपयले कण्डम प्रयोग नगर्नुको पछाडी रक्सीलाई कारक ठहरयाएका छन् । मदिरामा मात्तिएका बेला होस हुँदैन् लापरबाह पुर्वक सेक्स हुन्छ ।
कतिपयले भने पार्टनरले प्रयोग गर्ने परिवार नियोजनका अन्य साधानहरु जस्तै पिल्स तथा इम्प्लान्टको समेत प्रयोग समेत कारक भएको बताएका छन् ।
बेलायतको स्वास्थ्य विभागले गरेको सर्भेक्षणमा ठूलो युवा समूह कण्डमको प्रयोगबाट बाहिरै रहेको पाएपछि प्रयोग बढाउने अभियान शुरु गरिएको बताइएको छ ।
खासगरी २५ बर्ष मुनिका युवाहरुलाई संक्रामक रोगबाट बचाउँन अभियान शुरु गरिएको हो ।
त्यसो त यौन स्वास्थ्यको लागि पछिल्लो आठ बर्ष यता सरकारले पहिलो पटक क्याम्पियन समेत शुरु गरेको जनाएको छ ।
सर्भेक्षणले १६ देखि २४ बर्ष उमेर समूहका करीब आधा जसो युवकहरुले नयाँ साथीसंग यौनसम्पर्क गर्दा कण्डमको प्रयोग नगरेको देखाएको थियो ।
त्यस्तै सर्भेक्षणले हरेक १० मध्ये एक जना युवकले कहिल्यै पनि कण्डमको प्रयोग नगरेको देखाएको छ ।
विना कण्डमको मजा
रेक्सिम निवासी १९ बर्षीय जोर्डन भन्छन, ‘म धेरै केटीहरुसंग विना कण्डम यौनसम्पर्क गरिसकेको छु ।’
उनले आफ्नो यौन जीवनमा ५० प्रतिशतसंग मात्रै कण्डमको प्रयोग गरेको बताए ।
उनले कण्डम प्रयोग नगर्नुमा एउटा कारण आफू मदिराले लठ्ठिनु समेत भएको बताए ।
उनले मदिराले ‘झ्याप’ हुँदा बढी लापरबाह हुने बताए ।
सर्भेक्षणमा यो पनि थाह भयो कि नशाले गर्दा कण्डमको प्रयोग नहुँदो रहेछ । जोर्डनका यौन पार्टनर लिडिया पनि यो कुरामा सहमत छिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘मात्तिएका बेला सुरक्षित सेक्सको सम्भावना निकै कम हुँदो रहेछ ।’ उनीहरुले त्यसरी सेक्स गर्दा अर्को दिन गल्ती गरेको महशुस गर्दै परीक्षणका लागि क्लिनिक समेत पुगेको बताए ।
कण्डमको प्रयोग नगर्ने अर्को कारण पार्टनरले परिवार नियोजनका अन्य साधानहरु पिल्स तथा इम्प्लान्टको समेत प्रयोग हुने गरेको बताएका छन् ।
२० बर्षीया विद्यार्थी एली भन्छिन् यो आम समस्या हो । एली भन्छिन्, ‘जो युवकसंग विना कण्डम राखेँ त्यतिवेला संक्रामक रोगको भन्दा पनि गर्भ रहने हो कि भन्ने आशंका थियो ।
उनी भन्छिन्, यदि गर्भ रहयो भने यसको जिम्मेबारी केटाहरुमा पनि जान्छ तर यदि यौन संक्रमण भयो भने यो आफ्नो मात्रै समस्या हुनजान्छ । यदि केटी गर्भनिरोधक चक्की लिन्छ भने उसले कण्डम नलगाएपनि हुन्छ भन्ने संकेत दिएको पनि हो ।’
सन् २०१६ मा बेलायतमा क्लामेडिया तथा गनोरियाजस्ता यौन रोगबाट १५ देखि २४ बर्ष उमेरका १ लाख ४१ हजार व्यक्ति पिडीत थिए । २४ बर्षीय जेसीले कण्डम विनाको यौनसम्पर्कका कारण आफू पनि यी दुई रोगबाट पिडीत भएको बताए ।
कण्डम प्रयोग नगर्दाको असर
जेसीले भन्छिन्, ‘त्यो राम्रो अनुभव थिएन, पेट तथा जाँघको बीचमा दुखाई महशुस हुन्थ्यो । पिसाव गर्दा पोल्ने गर्दथ्यो ।
सबैभन्दा दुखको कुरा त यो थियो कि मैले पूर्व र बर्तमान यौन साथीलाई पनि सो रोग सारिदिएँ । उनीहरुलाई पनि क्लिनिक गएर औषधि गर्नुपरयो ।’
जेसीले यो अनुभव पछि कण्डमको प्रयोग गर्न थालेका छन् । उता गनोरिया रोगको उपचारमा पनि पहिले जस्तो
एन्टीबायोटिकले काम नगर्दा चिकित्सक समेत चिन्तित छन् ।
डाक्टर सारा केयाट भन्छिन्, ‘यौन संक्रामक रोगबाट बच्न सबैभन्दा सजिलो तरिका कण्डमको प्रयोग गर्नु नै हो ।’